Agab kaladuwan oo lagaadhsiiyay degmada shiniile - Cakaara News
Agab kaladuwan oo lagaadhsiiyay degmada shiniile
Shiniile (Cakaaranews )arbaco 15ka june 2016. Xafiiska arimaha haweenka iyo caruurta DDSI ayaa agab kaladuwan oo isugujira teendheeyin iyo agabka madadaalada caruurta gaadhsiiyay xarunta gobolka siti ee magaalada shiniile.
Hadaba wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta marwo raxma maxauud haybe ayaa sheegtay in agab kaladuwan oo isugujira teendhooyin iyo agabka maaweelada caruurta ay soo gaadhsiiyeen xarunta gobolka siti ee magaalada shiniile islamarkaana ay kuwareejiyeen maamulka gobolka siti. Waxayna intaa kudartay wasiiradu in agabkan loogu talagalay 10 qabalee oo ah magaalada shiniile.
Sidookale waxaa dhankiisa kahadlay gudoomiyaha gobolka siti mudane cabdiwali maxamed faarax oo sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay agabkan taageerada ah ee uu soo gaadhsiiyay xafiiska arrimaha haweenka DDSI islamarkaan aad ugu mahada celinayo taageerada isdaba jooga ah ee ay lagarb taaganyihiin gobolka siti oo ah gobol ay saamaysay isbadalkii cimilada.
Sikastaba ha ahaatee taageeradan agabka ayaa waxaa iskla kaashaday xafiiska iyo haayadaha bahwadaagta la ah waxaana lasii gaadhsiinayaa degmooyinka kale ee gobolka siti.